ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ခံတပ်ကြီးကိုတောင့်တင်းခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်ပါ - YTV
Home » Blogs » ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ခံတပ်ကြီးကိုတောင့်တင်းခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်ပါ
Blogs September 9, 2020 6:45 am
ကိုယ်ခံအားစနစ်ဆိုတာ ကျမတို့ရဲ့ ခံစစ်တိုက်စစ်မှုးကြီးပါ. ခံစစ် အားကောင်းတောင့်တင်းနေမှသာ ကူးစက်ရောဂါတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို ကာကွယ်တိုက်ထုတ်ရှင်းလင်း ပစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်. မကျန်းမာတဲ့ လူနာတွေသာမက ကျန်းမာနေဆဲ လူတွေလည်း ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ကြံ့ခိုင်အောင်ထိန်းသိမ်းဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်….
ကူးစက်ရောဂါများကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ လက်များကိုသန့်စင်အောင် မကြာခဏဆေးကြောခြင်း ၊ ဗီတာမင်ပါဝင်တဲ့အစားအစာများကို ကျန်းမာစွာစားသောက်ခြင်း ၊ ကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်ခြင်း နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းများ လိုအပ်ပါတယ်. ဒါ့အပြင် အချို့သောဆေးပင်များဟာ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို အကျိုးပြုတာကြောင့် ခုခံအားစနစ်ကိုမြှင့်တင်ဖို့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူများက အကြံပြုထားတဲ့ ဆေးဘက်ဝင် အပင်လေးမျိုးကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်….
Echinacea ဟာ အသုံးများတဲ့ ဆေးပင်တစ်မျိုးပါပဲ. Sinai ဆေးရုံရဲ့ အဆိုအရ Echinacea မှာ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းခြင်းနဲ့ ဓါတ်တိုးစေတဲ့ သက်ရောက်မှုများအပြင် နာကျင်မှုသက်သာစေပြီး ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိများရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်. Echinacea ဟာ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးပြီး ကိုယ်ခံအားစနစ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကိုမြှင့်တင်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးဆေးပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်. Cochrane စာကြည့်တိုက်တွင်ထုတ်ဝေသော ၂၀၀၆ ခုနှစ်စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုအရ echinacea ဟာ နှာရည်ယိုယွင်းခြင်းနဲ့ နှာပိတ်ခြင်းလိုမျိုး အအေးမိရောဂါလက္ခဏာများကို သက်သာစေပြီး ပုံမှန်ထက်ပိုမြန်ဆန်စွာ ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်.
ဒါ့အပြင် Echinacea ဟာ အစာအိမ်ရောဂါလက္ခဏာများ စတင်ဖြစ်ပေါ်ချိန်မှာ စုပ်ယူသော အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်မှုများအတွက် အကျိုးရှိတယ်လို့လည်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ echinacea ဟာ ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ခြင်းများနှင့်ဆက်နွယ်တဲ့ cytokines ရောင်ရမ်းခြင်းကို လျော့နည်းစေနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်…
သင်ဟာ များစွာသောလူများ ၊ ပိုးမွှားများရှိနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်များနဲ့ ထိတွေ့မိတယ်ဆိုရင် ၊ ဒါမှမဟုတ်ဖျားချင်သလိုလိုဖြစ်နေတယ်လို့ ခံစားရတယ်ဆိုရင် echinacea ထုတ်ကုန်များရဲ့ ထုပ်ပိုးမှုမှာပါဝင်တဲ့ ဆေးညွှန်းညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ကိုနှစ်ရက်သုံးရက်ဆက်တိုက် သောက်သုံးပေးပါ. လက်ဖက်ရည်ထဲကိုလည်း ထည့်ပြီးသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်…
ကြက်သွန်ဖြူဟာ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေတယ်ဆိုတာကိုတော့ အားလုံးသိထားပြီးဖြစ်မှာပါ. ဟုတ်ပါတယ် ကြက်သွန်ဖြူဟာ အစွမ်းထက်တဲ့ ရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ဆေးဖြစ်ပါတယ်. ကြက်သွန်ဖြူဟာ ကပ်ပါးကောင်များကိုတိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိရှိပြီး ကူးစက်ရောဂါပိုးများနဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်မှုများကို တားဆီးနိုင်ပါတယ်. ကြက်သွန်ဖြူဟာ အစာခြေစနစ်ကိုအားဖြည့်ပေးပြီး salmonella နှင့် E. coli လိုမျိုး အစားအစာအဆိပ်ဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားများကိုလည်း တိုက်ဖျက်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်. ဒါ့အပြင် ကြက်သွန်ဖြူဟာ အအေးမိခြင်းကိုလည်း သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါသေးတယ်လို့လည်း ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူများက ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်. တကယ်ကို ဆေးစွမ်းထက်ပြီး အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်လို့ အစားအစာတွေထဲမှာ ထည့်သွင်းစားသုံးကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်….
ဂျင်ဆင်း ဆေးပင်ဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကို ခုခံတဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်တုန့်ပြန်မှုကိုထိန်းညှိပေးတဲ့ hypothalamic, pituitary, adrenal axis - HPA ဝင်ရိုးကိုခိုင်မာစေပါတယ်. နာတာရှည် နဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုများဟာ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို အားနည်းစေနိုင်ပါတယ်. ဒါကြောင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ် အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ အားကောင်းတဲ့ HPA ဝင်ရိုးရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်. ဂျင်ဆင်းဟာ T-cells, B-cells, natural killer cells နဲ့ macrophages အပါအ၀င်ကိုယ်ခံစွမ်းအားဆဲလ်အမျိုးအစားများစွာကို ထိန်းညှိပေးပြီး ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်. ဂျင်ဆင်းအမြစ်ဖြင့် လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်သောက်ခြင်း ၊ ဂျင်ဆင်းကိုစားသုံးခြင်း ဒါမှမဟုတ် ဂျင်ဆင်းဆေးတောင့်ကို သောက်သုံးခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်…..
လင်ဇီး လို့လည်းလူသိများတဲ့ ရီရှီဟာ မှိုအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. Reishi မှိုများတွင် monocytes, natural killer cells နှင့် dendritic cells တွေအပါအ၀ င် ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်အတွင်းရှိဆဲလ်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကို လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ beta-glucans များပါ၀င်ပါတယ်. ဒီဆဲလ်တွေကို လှုံ့ဆော်ခြင်းအားဖြင့် ရောဂါကူးစက်မှုကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ပြီး တိုက်ခိုက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်. Reishi ရှိ beta-glucans ဟာ ကင်ဆာဆဲလ်များ ၊ အကျိတ်များကြီးထွားမှုကို တားဆီးဆန့်ကျင်နိုင်တဲ့ သက်ရောက်မှုများရှိတယ်လို့ Memorial Sloan Kettering Cancer Centre မှပြောကြားခဲ့ပါတယ်. reishi အမှုန့် ဒါမှမဟုတ် ဆေးတောင့်များကို ၀ယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်….
ကျမတို့ နေ့စဉ်ဟင်းချက်ရာမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကတော့ ပုံမှန်စားသုံးလို့ရပေမယ့် လင်ဇီး ၊ ဂျင်ဆင်း နဲ့ Echinacea ထုတ်ကုန်ဆေးဝါးများကို သောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး မယ်ဆိုရင် ပိုမို ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်….
အခုပြောပြခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်. အခုလိုမျိုးဗဟုသုတရစရာ အကြောင်းအရာတွေကို အမြဲတင်ဆက်ပေးသွားဦးမှာဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်...
Daily Show (155)
Y Music (10)
Y Music (International Songs)